Phupha ngeLampu yeBhiya Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Phupha ngeLampu yebhiya
Kuqala kwabakho umlilo, kwaye kukho ukukhanya. Iminyaka engama-10.000 XNUMX eyadlulayo abantu babesele basebenzise izibane zeoyile ukukhanyisa ubumnyama bobusuku. Le mithombo yokuqala yokukhanya okwenziweyo yayizizitya zamatye ezisicaba ezizaliswe ngamanqatha ezilwanyana. Kamva, izibane zeoyile zazisoloko zenziwe ngobugcisa ngobugcisa kwaye zizaliswe ngeoyile yemifuno.
Ubumnyama ngoko babwahluke kakhulu kunangoku, xa izakhiwo ezingenakubalwa ezikhanyisiweyo kunye nezibane zesitalato ziqinisekisa ukubonakala okuhle ngalo lonke ixesha. Xa kusihlwa kwawa kwiminyaka engama-2000 eyadlulayo, wawungasiboni isandla sakho phambi kwamehlo akho. Obu mnyama bungangeneki buhlala busoyikisa abantu. Ngesibane seoyile, oomoya abakhohlakeleyo banokugxothwa, kungabizwa i-genie, kwaye neentshaba zinokubonwa ngokulula. Ukukhanya kwakhe kwakuthetha unqabiseko.
Ngengqondo yokomfuziselo, isibane sinokuzisa ukukhanya kubumnyama bokomoya: "Uyaqonda". Emaphupheni, umntu uhlala exhalabile malunga nemicimbi engasonjululwanga kubomi bemihla ngemihla. Ngoncedo lwesibane seoyile, unokuyibona ngokukhanya okutsha kwaye uqaphele impendulo. Mhlawumbi umntu ophuphayo unqwenela ukukhokelwa sisibane seoyile kubulumko. Ukutolikwa kwamaphupha, kubalulekile ukwahlula ukuba umntu uphupha ngesibane esikhanyayo okanye esikhanyayo, nokuba siyacima okanye siyaqhubeka.
1 Uphawu lwephupha «isibane seoyile» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isibane seoyile» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isibane seoyile» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isibane seoyile» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa kwamaphupha, isibane seoyile simi njengophawu lwephupha bulumko y impilo kunye nomnqweno wokukhokelwa kunye nolwazi. Ukuba ukukhanya kwesibane kukhanya ngokuqaqambileyo, olu luphawu lokulinganisa ubuthongo, ukuba kukhanya nje kabuhlungu phambi kwakho, uphawu lwephupha lubonisa ngokomoya. Uburhabaxa y Umothuko wombane phantsi.
Ukuba umntu ukufuphi nokukhanya kwesibane seoyile ephupheni, oku luphawu lwe ukuqonda okucacileyo yokuphupha. Ukulayita isibane kuthetha ukunceda kunye neengcebiso kwimeko enzima, ngelixa ucima isilumkiso sokudideka kwangaphakathi.
Isibane seoyile luphawu lokulala ekuchazeni amaphupha, athi Efihliweyo iyabonakala unako. Oku kunokuba yimfihlo yokwenyani, kodwa kunye neemvakalelo neengcinga. Nabani na osebenzisa isibane esikhanyisiweyo ephupheni uzimeleyo kwaye wenza uluvo lwakhe, alukhuthaza ekuhleni. Isibane esizaliswe ngeoli sidla ngokubonisa umntu obaziyo.
Kwiinkolelo zabantu baseIndiya, ukusebenzisa isibane seoyile ephupheni kuthetha ukuba iphupha lisendleleni elungileyo.
Uphawu lwephupha «isibane seoyile» - ukutolikwa kwengqondo
Ukukhanya kwesibane luphawu oluqinileyo lwephupha impilo, iRazón y ingqondo yokuyila. Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, isibane seoyile simele ukhuseleko ekutolikeni amaphupha, kuba ukuqaqamba kwawo kugxotha uloyiko lobumnyama.
Nabani na ophupha ngesibane seoyile esikhanya ngokuthe ngcembe woyika ukuncipha kwamandla abo obugqi. Ukoyika ukwaluphala kunye ukufa inokubonakaliswa nakuyo. Kwelinye icala, isibane esidanyazayo sesibane seoyile esikhanyayo sinokubonisa ukuba iphupha likwimo yokomoya. Inkqubo yokutshintsha ifunyenwe. Iphupha elinjalo linokutolikwa ngokuqinisekileyo.
Uphawu lwephupha «isibane seoyile» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha "isibane seoyile" sibhekisa kwinqanaba lokomoya ekutolikweni kwephupha kwimbono yokukhanya njengophawu lobuthixo, ongasekhoyo. Kodwa unokubandakanya ukukhanya komoya wephupha, ukunxibelelana nawe el mundo yokomoya kwaye iyayikhanyisa.